Skin – Healthy Life Journal
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နှင်းခူဆိုတာ အရေပြားရောင်ရမ်းတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ပါ။ လက္ခဏာအနေနဲ့ အရေပြားနီမြန်းတာ၊ ရောင်တာ၊ ယားတာ၊ ခြောက်တာ၊ အဖတ်လန်တာတို့ဖြစ်တတ်သလို ပြင်းထန်တဲ့ ပိုးဝင်မှုကြောင့် အရည်ကြည်စိမ့်ထွက်တာနဲ့ သွေးထွက်တာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နှင်းခူဖြစ်ရင် သက်သာစေဖို့ အိမ်တွင်းကုသနည်းတချို့ကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ သဘာဝဆေး (၁) ဂျုံမှုန့်သုံးပြီး...
လေ့လာမှုစစ်တမ်းတွေအရ အမေရိကန်မှာ အရွယ်ရောက်သူ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်နဲ့ ကလေး ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ တစ်ခုခုနဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုဝေဒနာ ဖြစ်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အစားအသောက်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်တတ်တာကို လူတိုင်းသိပေမယ့် လူအများမသိဘဲ ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်တတ်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေရှိပါတယ်။ (၁) လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့်...
၀က်ခြံအမာရွတ်နဲ့ အရေပြားမညီမညာဖြစ်ခြင်းတို့ကို ဖယ်ရှားနိုင်မည့် နည်းလမ်းကောင်း ၇ သွယ်
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လူဦးရေရဲ့ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းက သူတို့ဘ၀မှာ တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်ဆိုသလို ၀က်ခြံပေါက်တတ်ပါတယ်။ ၀က်ခြံနဲ့ တခြားအရေပြားအပြစ်အနာအဆာ ထင်တာတွေက စားသောက်နေထိုင်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို အရေပြား အပြစ်အနာအဆာတွေဖြစ်ပြီး ၀က်ခြံအမာရွတ်တွေထင်တာ၊ အရေပြားမညီမညာဖြစ်တာတွေ ရှိခဲ့ရင် အောက်ပါနည်းလမ်းတွေသုံးပြီး...
ခြေထောက်တွင် ဆိုးရီးယေးစစ် အရေပြားနာဖြစ်ခြင်း
၊ မီမိုးမေ ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဆိုးရီးယေးစစ်အရေပြားနာက ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်အစိတ်အပိုင်းမှာမဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခြေထောက်မှာ ဆိုးရီးယေးစစ် အရေပြားအနာဖြစ်နိုင်ခြေများပါတယ်။ ခြေထောက်တွေက စိုစွတ်နွေးထွေးလေ့ရှိတာကြောင့် ဆိုးရီးယေးစစ်ရောဂါဖြစ်ရင် ပိုပြီးကြာရှည်တတ်ပါတယ်။ ဖိနပ်စီးရာမှာလည်း ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက် ဆိုးရီးယေးစစ်အရေပြားနာကို အလွယ်တကူ ကုသနိုင်မယ့် သဘာဝနည်းတွေကို မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ သဘာဝဆေး...
ရေကြီးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အရေပြားရောဂါများ (၁)
ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. ရေကြီးချိန်နဲ့ ရေကြီးပြီးချိန်မှာ ဘာကြောင့် အရေပြားရောဂါတွေ ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ. သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေက ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးစတာတွေမှာ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများစွာ ဖြစ်စေပါတယ်။ ရေကြီးချိန်မှာ ဗွက်ရေ၊ အညစ်အကြေးတွေထိတွေ့ထားတဲ့ မသန့်ရှင်းတဲ့ရေ...